🥇Best FCA Regulated Brokers of March 2021 | Full Learn 2 Trade Guide
2021 FCA kacha mma - Mụta ahia 2
Ohere inweta bụ nụla nke Financial Conduct Authority (FCA). Mana, ọ bụrụ na ịnweghị, FCA bụ otu nọọrọ onwe ya nke na-achịkwa ihe dị ka ụlọ ọrụ azụmaahịa 60,000 UK.
Na-enweghị FCA, anyị agaghị enwe akwa mkpuchi a pụọ ​​na ohi amata, ịchụ ego na ego ndị na-eyi ọha egwu. Naanị iji ndị na-ere ahịa FCA, ị na-echekwa ọ bụghị naanị ego gị kamakwa ozi nkeonwe gị.
Taa, anyị ga-ekpughere ndị na-ere ahịa FCA kachasị mma na azụmaahịa UK. Iji mee ka ndị na-ere ahịa anyị dị elu, anyị lere anya etu ikpo okwu si arụ ọrụ yana ụdị ngwa ọrụ saịtị ga-enye. Na mgbakwunye na nke ahụ, anyị ga-enyocha usoro dị mkpa dịka aha ụlọ ọrụ, ụgwọ bara uru na iche iche akụ.
Gịnị bụ FCA?
The FCA mbụ malitere na April 1st 2013, ya mere a ga-agbaghara gị maka iche na ọ bụ ọrụ ọhụụ. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na FCA dị n'aka ndị ọrụ njikwa ego (FSA) bụ onye isi nchịkwa UK na ngalaba ego ọtụtụ afọ.
Nke ahụ bụ ruo mgbe e kewara FSA ụzọ abụọ dị iche iche; FCA na Prudential Regulation Authority (PRA). Nke ikpeazụ bụ ahụ na-ahụ maka ilekọta na ịhazi ndị ọrụ otuto, ụlọ akụ, ndị inshọransị na ụlọ ọha wdg.
FCA bụ ụlọ ọrụ ọha na eze nke a na-arụ ọrụ ugbu a iji nyochaa omume ego n'ime UK. N'ihe na-aga n'ihu na FSA na-ekewa ụzọ, emeziri ego maka Ọrụ Ego na Ahịa 2000. N'aka nke ya, Iwu Ọrụ Ọrụ Ego 2012 mere ụfọdụ nnukwu mgbanwe, ọkachasị ma a bịa n'ụzọ e si achịkwa ngalaba ego ugbu a.
Ekwenyere na nnukwu nsogbu akụ na ụba gafere 2008 na 2009 rụrụ nnukwu ọrụ na nlọghachi nke oghere ego na otu esi achịkwa ya ma chekwaa ya. Ebumnuche bụ isi nke FCA site na mbido bụ ime ka ụlọ ọrụ ego na azụmaahịa bụrụ ebe dị nchebe. Nke a pụtara ahịa ziri ezi na nke ọma maka onye ọ bụla - ọ nweghị ma ọ bụ buts.
Marketsbọchị ndị a, ahịa na akụ na ụba agaghị arụ ọrụ otu na-enweghị FCA. Ahụ mmadụ na-eme ka iguzosi ike n'ezi ihe nke ahịa ego na-ewusi ma na-echebe ndị ahịa, kamakwa na-akwalite asọmpi na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọnọdụ dị a doaa ka ndị na-ere ahịa na-ezukọ maka Nkwado FCA?
FCA anaghị eme ka ọ dị mfe maka ndị na-ere ahịa, ebe ọ bụ na ịnweta ikikere na-ewe ọnwa na ọnwa nke nyocha na ịwụ elu site na hoops iji mezuo ụkpụrụ ahụ. Ka onye na-ere ahia wee nweta ikikere FCA, ha ga-egosiputa na ha nwere ike irube isi n'iwu na ụkpụrụ omume nke onye na-achịkwa ya. N'elu nke ahụ, ha ga-arụ ọrụ nke ọma n'ime iwu UK.
Nke a bụ nnukwu ozi ọma maka ndị na-etinye ego, ebe ọ pụtara na a na-aza onye na-ere ahịa ajụjụ ma na-agbaso ụkpụrụ siri ike. Ga-ahụ n'okpuru ndepụta nke ihe achọrọ, ihe niile a ga-agbaso ya site na onye na-ere ahịa ọ bụla tupu a nyefee ikikere:
Ọ bụghị ihe nzuzo na nnukwu nnukwu ego nwere ike ibute ụgwọ ma ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị akpachara anya. N'ezie, ọ bụrụ na e metọrọ ya nwere ike ibute nnukwu mfu. Na nzaghachi nye ụfọdụ ndị na-ere ahịa na ntanetị na-enye nnukwu ego dị elu (dịka ọmụmaatụ 1: 1000), FCA webatara oke maka ndị ahịa azụmaahịa. Nke a pụtara nanị 'onye na-etinye ego Joe' nke na-esiteghị na ọkachamara ma ọ bụ usoro azụmaahịa ụlọ ọrụ.
Iji maa atụ, ndị na-ere ahịa CDF na-ejedebeghị inye onyinye maka etiti 1: 2 na 1:30. Ka anyi kwuo na onodu onye ahia ahu dara n'okpuru 50% nke ego a choro iji dochie onodu ha (n'ihe banyere akaụntụ CFD). N'okwu a, ụlọ ọrụ na-ere ahịa nwere imechi ọnọdụ onye ahịa ozugbo.
N'agbanyeghị ebe onye na-ere ahia na-edebanye aha maka akaụntụ, ndị na-ere ahịa FCA niile kwesịrị inwe ike ịmata onye ọ bụla na-etinye ego na-edebanye aha ha n'elu ikpo okwu. Nke a bụ ihe kpatara na ịnweghị ike ịdebanye aha na ụlọ ọrụ na-achịkwa azụmaahịa na-enweghị inye ụdị dị iche iche njirimara.
Ebumnuche nke amụma AML bụ ịmata ma nyefee ọrụ ego ọ bụla na-enyo enyo. Nke a gụnyere ịkwado ego ndị na-eyi ọha egwu, itinye ego n'ịgba ahịa, aghụghọ na aghụghọ wayo. Brokas na-iwu chọrọ rube isi n'ihe ize ndụ dabeere na atumatu na onye ahịa ntụpọ-achọpụta.
N'iburu n'uche ilekọta mkpa ndị ahịa, ha ga-egosikwa nghọta nke nlekọta ndị ahịa yana mkpa ọ dị ịmalite 'profaịlụ ihe egwu dị na ndị ahịa'. Onye ọ bụla na-azụ ahịa FCA ga-enyocha ma chọpụta usoro ọ bụla na-enyo enyo ma nyefee ya ozi ahụ.
Anyị ekwuola na ndị na-ere ahịa na-awụli elu maka nnabata maka FCA - yabụ otu n'ime ọtụtụ ihe achọrọ bụ nyocha kwa afọ.
Mkpebi a na-ere ahịa na ajụjụ ga-eme ka FCA mata maka akụ na isi obodo ya niile. Dịka iwu 'Companlọ Ọrụ Iwu', ikpo okwu ga-agbazite onye nyocha nke iwu iji mepụta akụkọ kwa afọ nke ụdị a. Achọrọ ka a deba akụkọ nyocha ego CASS na FCA.
Ọnọdụ usoro iwu agbanweela nke ukwuu n'ime afọ iri gara aga, ndị na-ere ahịa ugbu a na-aza ajụjụ karịa mgbe ọ bụla maka ịgbaso iwu. Ọzọkwa, nke a bụ naanị ozi ọma maka gị dị ka onye ahịa!
Ndị na-ere ahịa FCA kwesịrị ịkọwa ụgwọ niile akwụ ụgwọ n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya. Nke a gụnyere 'ọkwa ozi' na-akọwapụta etu na mgbe a ga-akwụ ụgwọ ndị a maka ụlọ ọrụ ahụ - ọkachasị ma a bịa n'ihe akụ CFD.
Ọzọ, anyị nwere 'nkwenye ndị ahịa'. Nke a bụ ụdị nke ndị ahịa ga-ejupụta iji gosipụta na a gwala ha ma ghọta 'ọkwa ozi' akpọburu.
Nlekọta siri ike dị mkpa maka ndị na-ere ahịa na FCA. Nke a gụnyere nyocha ndabere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ileba anya na usoro nnabata ụlọ ọrụ ahụ. A na-atụle FCA ahazi ndị na-ere ahịa mgbe niile, ọ ga-enyocha ihe ndekọ ego niile site na ahụ.
Ka anyị kwuo dịka ọmụmaatụ na onye ahịa yiri ka ọ na-etinye ego buru oke ibu. Na nke a, na-enweghị isịneke, na ore ahia a iwu chọrọ ka n'ịwa ihe enwekwukwa ruru ịdị uchu akụkọ. Onye oru FCA obula gha agha inweta ihe omuma nke ebe enyere ego.
Brokelọ ọrụ ọ bụla na-ere ahịa ga-ekewapụ ego ndị ahịa na akaụntụ ọ bụla na aha ụlọ ọrụ. Iwu a iji chebe ego gị na mmemme ọ bụla megidere iwu, ma ọ bụ azụmaahịa na-apụ n'ahịa.
Kedu ihe nchedo FCA na-enye?
Dị ka anyị kpuchie, FCA na-enye ndị ahịa ahịa nchekwa dị iche iche ma na-achịkwa ndị na-ere ahịa n'ịntanetị site na iji ọkpọ. Onye ọ bụla na-ere ahịa FCA ga-agbaso ụkpụrụ ahịa azụmaahịa nke otu a setịpụrụ wee nwee ike ịtụ anya na a ga-enyocha ma nyochaa ya oge niile.
N'ihi Nchedo Ego, a ga-echedo ego gị ruo £ 85,000 site na 'Ego Ọrụ Ego Ego' (FSCS). Na mgbakwunye, aA ga-elekọta ihe ndị ahịa ndị ahịa site na ichekwa ego echekwara. Measurekpụrụ a na-egbochi isi obodo gị pụọ na ajọ omume ọ bụla site na ikpo okwu nke onye na-ere ahịa, yana ụgwọ ụlọ ọrụ ọ bụla metụtara na ikpo okwu ahụ.
'Ekewaputala ego' onye na - ere ahia na - elekọta ya mgbe ụfọdụ, onye ga - ahụ maka ịlaghachikwute gị ego gị ma ọ bụrụ na usoro onye na-ere ahịa na-apụ ahịa.
Kedu akụ ndị FCA Regulated Brokas Na-enye gị ohere ịzụ ahịa?
Fọdụ ndị na-ere ahịa FCA na-achịkwa nwere ike itinye uche na ọnụọgụ nhọrọ nke akụ, ebe ndị ọzọ na-enye ihe niile. Anyị achịkọtara ndepụta nke akụ kachasị ahịa dị.
Ekekọrịta Ahịa na Ahịa
Na nkenke, share na-emekọ bụ ụzọ ị ga - esi zụta ma ree mbak na ụlọ ọrụ, na UK na mba ụwa. Iwu bidoro / juo mgbasa na ịzụ ebuka bụ ọdịiche dị n’etiti ihe onye na-azụ dị njikere ịkwụ, na ihe onye na-ere dị njikere ịnabata ire.
Site na ahịa a, ị nwere ike itinye ego na ụlọ ọrụ ndị edepụtara n'ihu ọha, yana inwe ike ire mbre site na London Stock Exchange (LSE) na Alternative Investment Market (AIM). Kwesighi ịzụta naanị 1 òkè na HSBC ma ọ bụ AstraZeneca, dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịzụta ụmụ irighiri ihe.
E nwere ụdị ụfọdụ FCA na-emekọrịta ndị na-ere ahịa na-ahụkarị na oghere.
Ndị ndụmọdụ ndụmọdụ: Nke a na ụdị mbak emeso ore na-enye gị ndụmọdụ na ihe mbak ga-abụ ihe ọma ịzụta ma ọ bụ na-ere. Ma ị kpebiri ịzụta ma ọ bụ ree ga-abụ nke gị.
Ndị nwere uche nwere ọgụgụ isi: Maka ndị ahịa na-enwe mmasị iji azụ azụ, onye na-azụ ahịa nwere ezi uche bara uru. Nke a ore-ewe ngụkọta akara nke ịzụ na n'ire mkpebi nke mere na ị na-adịghị. Mara banyere ụdị azụmaahịa metụtara ụdị azụmaahịa a.
Igbu Broka: Onye na-ere ahia a na-eme ihe iwu nyere n'iwu, ọ naghị egbochi ya ma ọlị.
The London Stock Exchange na-enyere FCA aka ịhazi ndị na-agbanwe agbanwe na nkwekọrịta kwekọrọ ma jụọ ọnụahịa. Nke ikpeazụ a ga-adị elu karịa ọnụ ahịa ego ahụ, ihe dị iche wee mepụta 'gbasaa'. Nke a bụ ego na-enweghị isi karịa FCA na-achịkwa ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ maka inye gị ohere ịbanye n'ahịa ịchọrọ.
Nkwekọrịta maka Ọdịiche (CFDs)
Kinddị ahia a na - enyere gị aka ịkọ mgbanwe ọnụahịa nke ọtụtụ ngwa dịka ebuka, ego, ngwaahịa na indices. Ọ bụrụ n’echiche na ọnụ ahịa ahịa ga-arị elu ị nwere ike ‘zụta’ ma ọ bụ ‘gaa ogologo’. Ọ bụrụ n ’aka nke ọzọ, ị kwenyere na ahịa ga-ada, ị nwere ike‘ ree ’ma ọ bụ‘ gaa mkpụmkpụ ’.
Na CFDs, ndị ahịa ekwesịghị inwe akụ na ụba. Kama nke ahụ, CFD na - enyere gị aka ịgbaso ọnụ ahịa akụ nke ụlọ ọrụ, na n'oge. N'ihi ya, ị nwere ike irite uru site na mgbanwe ọnụ ahịa site na ịga 'obere' ma ọ bụ 'ogologo', na mgbe na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla. Ndị CFD na-enyekwa ndị ahịa ohere ịnweta ụlọ ọrụ ndị akwụ ụgwọ.
Dị ka ihe atụ nke CFDs:
Ka anyị were nye ọnụ ahịa Amazon ka ọ dị $ 3,001 na NASDAQ
Sta stale £ 500 na a Buy iji - nke pụtara na ị na-eche Amazon ebuka ga-amụba
Otu ụbọchị mgbe e mesịrị, ọnụahịa nke ngwaahịa Amazon bụ 10% dị elu na NASDAQ
Nke a pụtara na uru nke £ 500 CFD gị mụbara site na 10%
Na-emechi ọnọdụ ahụ, na-enweta £ 50 n'ụzọ
N'ụzọ dị oke mkpa, ị nwere ike ịzụ ahịa na uru site na ebuka Amazon site na CFDs - nke pụtara na a chọghị ka ị nweta ya.
Dịka onye na-azụ ahịa, ịkwesịrị ịkọwa n'ụzọ ziri ezi mgbanwe ọnụahịa nke indices, ka ị nwee ike nweta uru. Can nwere ike ma ahia otutu indices ma ọ bụ itinye uche na otu index. Nweghị ike ịzụta ndeksi dịka ị nwere ike iji ebuka. Indices bụ ihe ngosipụta nke ijikọ ọnụ nke ọtụtụ akụ.
A na-atụle index index ndị a n'otu isi ihe, ma na-agakwa dị ka nke a. Indices investors enweghi ike igbanwe ihe ndekota ya gha aghaghi ime ya site na ETF, odinihu ma obu CFDs. N'ụzọ dị otú a, ndị na-etinye ego nwere ike ịkọwa mgbanwe nke indices na-enweghị mkpa ịzụta akụ nke ọ bụla. Nkọwa ọ bụla na-agbakọ uru n'ụzọ nke ya.
Ahịa a na-agba 24/7, a na-ahụta ya ka ọ na-agbanwe nke ọma maka ndị ahịa nwere ike ha agaghị enwe oge azụmaahịa na mgbanwe ngwaahịa. E nwere ụfọdụ ndị ọchụnta ego nwere ọganiihu na-azụ ahịa naanị ngwaahịa. Na ahịa a, e nwere 'ngwa ahịa siri ike' na 'ngwaahịa dị nro'.
Ngwaahịa 'Soft' gụnyere:
Ọka, Owu, Canola, ọka bali, ọka, osikapa
Sugar, koko, kọfị, oroma oroma
Ajị anụ, Rubber
Ehi na-adị ndụ, anụ ezi anụ ezi
A na-ahụta ngwa ahịa ndị a ka 'ngwaahịa siri ike':
Gold, Ọla kọpa, ọlaọcha, aluminom
Mmanụ Mmanụ Ala, gas nkịtị, kpo oku, mmanụ ụgbọala a na-akwadoghị
Ebute, Nickel, Platinum, Palladium, Tin, Zinc
Tupu ahia ụdịrị akụ a, ọ dị mkpa ịghọta etu ahịa ahịa si arụ ọrụ. Zụ ahịa na ngwa ahịa nwere ike ime ka pọtụfoliyo gị bawanye ma belata nsogbu gị.
Onwere mmadụ ole na ole na-anụbeghị banyere cryptocurrencies. Tradezụ ahịa cryptocurrency, ndị ahịa ga-ebu amụma ịrị elu ma ọ bụ ọdịda nke ọnụego ego. All na-enweghị mkpa 'inwe' ego na-akpata. Ọ bụrụ na ikpe ahụ bụ na ịchọrọ ịnweta mkpụrụ ego na-akpata, ịkwesịrị ịzụ ahịa site na onye na-azụ ahịa CFD nke FCA na-achịkwa.
Ihe mkpuchi ọtụtụ ndị mmadụ nụrụ bụ Bitcoin, agbanyeghị, enwere ndị ọzọ ị ga - ahụ ma ha bụ:
Ọ bụ ezi echiche ị ga-aga ịzụta na ire cryptocurrencies na akaụntụ ngosi FCA broo. N'ime nke a, ịnwere ike ịnwale trading azum bụ 100% enweghị nsogbu ọ bụla.
Mgbe onye ahia chọrọ ịzụ ahịa ego mba ọzọ, ha na-atụgharị na FCA Forex broker iji nye iwu. Nke a na - enyere gị aka ire ma ọ bụ zụta ụzọ ego abụọ dịka GBP / USD. Oghere ahịa ọdịnala ọdịnala na-agba 24 awa kwa ụbọchị na ụbọchị 5 kwa izu. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-achịkwa usoro FCE na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ngwụsị izu, kwa. A maara nke a dị ka 'na-ereghị oge'.
Dị Forex dabara na edemede 3; majors, umuaka, na exotics.
Isi ụzọ abụọ bụ ndị kasị mmiri mmiri na ina, dị ka EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD - ole na ole aha. Pzọ abụọ a nwere mgbasa dị ala ma nwee ike azụmaahịa ọtụtụ oge.
A bịa na ụmụ aka, a na-akpọkarị ha abụọ ụzọ abụọ - tinyekwa ego mba US. Ihe Nlere gunyere GBP / JPY, EUR / GBP, CHF / JPY.
Oticdị abụọ dị iche iche na-ejikarị mgbasa dị elu. Nke a bụ n'ihi na anaghị azụ ahịa oge ụfọdụ. Exdị abụọ dị iche iche gụnyere EUR / TRY, USD / HKD, GBP / ZAR.
Ọ dị mma ịhọrọ ikpo okwu nwere ọtụtụ ihe mmụta, yana yana eserese ọnụahịa na nyocha ahịa. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mgbe ọ bịara n’ahịa mbu mgbe ahụ Capital.com bụ nnukwu ikpo okwu iji tụlee. A na-atụ aro eToro maka newbies n'ihi interface ya na ikike i copyomi ndị ahịa nwere ahụmahụ
Etu esi achọta ndị ọrụ FCA kacha mma?
Nke mbu, i kwesiri ijide n’aka na onye ahia ahia gi kariri nke oma. Dika anyi mere ka anyi mata nke oma, ichota onye ahia ahia nke FCA di oke nkpa dika aru ya diri ichebe gi dika onye ahia.
Naanị itinye aka na ikpo okwu na-arụ ọrụ n'ime iwu UK, ị na-emepụta ụgbụ nchekwa na ohere nke ọtụtụ ụlọ ọrụ aghụghọ. N'ihi nke a, anyị achịkọtara ndepụta nke ịtụle mgbe anyị na-achọ ndị ọrụ FCA kachasị mma na 2021.
Di iche iche aku
Tupu iwere imi, ọ dị mkpa ịmata ihe akụ ga-enye gị. A sị ka e kwuwe, ị nwere ike ịchọrọ ịzụ ahịa na Forex ugbu a, ma emesịa gbadaa, ị nwere ike ikpebi ịfefe gafee akụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ Forex ị nwere mmasị n'ịzụ ahịa, ọ dị oke mkpa na ị ga-enyocha onyinye ego saịtị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na ụzọ abụọ, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnye ego zuru oke - dị ka ndị isi, ụmụ aka na exotics.
Maka nke a, ọ dị mma ịchọta onye na-achịkwa FCA nke na-achịkwa nke na-enye ọtụtụ klaasị akụ. Wayzọ a, ị nwere ihe niile ị na-achọghị ịzụ ụlọ n’okpuru otu ụlọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye na pọtụfoliyo gị mgbe nke a gasịrị, nke a na-azọpụta gị ịgafe usoro ịchọta ikpo okwu broker ọzọ.
Ọrụ na Fegwọ
Onye ahia ahia obula di iche na ego. E nwere nyiwe na-adịghị ana ndị ahịa ụgwọ ọrụ ego ma ọlị. E nwekwara ndị ọzọ na-ana otu pasent etinyere na azụmaahịa ọ bụla.
Ikekwe bụ na site na onye na-ere ahịa FCA, ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ azụmahịa. Nke a ga - abụkarị ọnụọgụ mgbanwe na azụmaahịa ọ bụla
Dị ka ọmụmaatụ; ka anyi kwuo na I na-ere ahia di na nwunye.
Gị ore ebubo 0.2% na isslọrụ
Stake na-etinye £ 1,000 na GBP / USD
Ga-akwụ ụgwọ azụmaahịa ahụ ker 2 maka ụgwọ maka azụmaahịa ahụ.
Ozi ọma maka gị bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa FCA ahaziri edepụtara na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị akwụ ụgwọ otu penny na ọrụ. Kama nke ahụ, a na-ewu ụgwọ niile n'ime mgbasa!
A na-elegharakarị ya anya, mana ọ dị ezigbo mkpa - nkwado ndị ahịa bụ akụkụ buru ibu nke ịhọrọ ezigbo onye na-ere ahịa maka gị. Isi okwu ebe a support. Dika odi, ichoro iru ahia nke n’enye ndi ahia ya aka n’awa elekere iri n’uburuchi na ubochi asaa n’izu uka. N'oge gị nke mkpa, ị chọrọ ịmata na ore ahia gị na-aga ebe ahụ iji nyere gị aka.
Ndị na-ere ahịa FCA kachasị mma na-enye ọtụtụ nhọrọ nkwado ndị ahịa dịka nkata ndụ, email, ekwentị na ụdị ịkpọtụrụ. Inwe onye na-ere ahịa nke na-ebikwa mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji hụ akụkọ kachasị ọhụrụ, yana ịgwa ndị ahịa ndị ọzọ okwu.
Nke mbu, oburu n’inwere uzo ugwo obula ichoro iji mee ihe, ikwesiri ichoputa ihe nhọrọ gi di n’elu ikpo okwu tutu ịga n’ihu.
N'ihe banyere oge nhazi - nke kachasị ịchọrọ onye na-ere ahịa nwere ike ịhazi ego gị ozugbo.. N'ezie, nke a dabere na azụmaahịa ọ bụla, yana usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwụnye ma bido ịzụ ahịa ozugbo ahụ nhọrọ dịka e-wallets na debit / kaadị akwụmụgwọ na-abụkarị ngwa ngwa ịhazi.
'Mgbasa' bụ ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa. Nke a bụ ihe dị iche na n'etiti ere price na ịzụ price nke akpan owo (nọmba nke pips).
Mgbasa ahụ na-eme ka ọdịiche dị na uru ole ị kwụrụ iji nweta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mgbasa nke EUR / USD bụ pips 4, itinye ego gị ga-abawanye ma ọ dịkarịa ala 4 pips ka ị wee daa.
Ngwaọrụ mmuta na azuma ahia
E nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ngwá ọrụ ịzụ ahịa nke a na-ewere dị oke ọnụ ahịa maka ndị ahịa ọ bụla. Atụmatụ ndị a nwere ike inyere gị aka n'inyocha ahịa.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ejirila ndepụta ngwa ngwa nke ngwa ọrụ agụmakwụkwọ na azụmaahịa ndị a na-ahụkarị na ndị na-ere ahịa na FCA.
Ndụ na akụkọ ihe mere eme: N'ikwu okwu n'ozuzu, atụmatụ a na-agwa ndị ahịa banyere mgbanwe ọ bụla ahịa na ahịa. Ọ bụkwa ihe dị mkpa mgbe ị na-emeghachi nyocha, nyocha teknụzụ na atụmatụ itinye ego.
Chaatị na egosi: A na-egosiputa echiche nke ahịa site na njirimara teknụzụ na eserese.
Ahịa akpaaka: Nke a abụghị iko tii nke ọ bụla na-azụ ahịa, mana ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-akwado usoro azụmaahịa akpaghị aka, dịka ọmụmaatụ, an ọkachamara ọkachamara.
Iwu igbu Protocol: Ebe kachasị mma ị ga-ere ahịa ga-eme iwu gị n'ime sekọnd ole na ole, ọbụlagodi milliseconds. Nke a dabere n'ụdị atụmatụ azụmaahịa eji (yabụ akpaghị aka) na ọnụ ahịa uche.
Ihe ngosi nka oru egosiputara na udiri ihe nlere di nma di nma:
Ndabere ahia ahia na ahia
Ndị na-etinye ego na-eji usoro nhazi nke atọ eme ihe iji jikwaa ma jiri anya nke uche hụ pọtụfoliyo ha, ma tinye ahịa karịa otu onye na-ere ahịa n'otu oge. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na iji nyiwe nọọrọ onwe ya, ị kwesịrị ịlele mgbe niile ụdị nyiwe onye na-ere ahịa gị na-akwado, ọ bụrụ na ọ bụla.
Ka ọ dị ugbu a, usoro ịzụ ahịa kachasị ewu ewu bụ MT4. Ngwaọrụ nke atọ a dakọtara na ọtụtụ ndị na-ere ahịa FCA. N'elu ịchụpụta ihe ngosipụta nke ọrụ ntanetị na eserese eserese, MT4 na-enyekwa gị ohere ịwụnye robot azụmaahịa akpaghị aka.
Ma ị nwere ahụmịhe ma nwee atụmatụ azụmaahịa a kapịrị ọnụ n'uche, ma ọ bụ dị ọhụụ ma meghee nhọrọ - mee ka ị mụta ihe ndekọ dị.
Fọdụ ndị na-ere ahịa FCA na-achịkwa ịntanetị na-enye ọtụtụ nhọrọ akaụntụ dị iche iche dịka nano (0.001), micro (0.01), mini (0.10), na ọkọlọtọ (1.00). Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akaụntụ micro, dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị akpọsa akaụntụ ndị a n'ezie mana ha ga-akwado gị n'ịzụ ahịa obere obere.
Maka ndị na-eso ụzọ okpukperechi Alakụba, ụfọdụ ndị na-achịkwa FCA na-achịkwa na-enye Akaụntụ Islam. Emegharịrị ihe ndekọ ndị a iji soro Iwu Sharia, bụ nke a machibidoro ịkwụ ma ọ bụ ịnata ọmụrụ nwa na ya. N'ihi ya, ndị na-etinye ego na-eji Akaụntụ Islam anaghị akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa ma ọlị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ụdị akaụntụ a ọ bara uru ịjụ onye na-ere FCA na ajụjụ iji hụ ma ha ga-anabata mkpa akaụntụ gị.
Bido na FCA Regulated Broker Taa
Ugbu a ị maara ihe niile ịmara gbasara FCA na-achịkwa ndị na-ere ahịa, ị kwesịrị ịdị njikere ibido. Ọ bụrụ n’agbanyeghi na ịchọtabeghị onye na-ere ahia FCA ị nwere ntụkwasị obi na ya, yabụ echegbula onwe gị. Nwere ike ịlele anyị akwadoro FCA usoro agbanwe agbanwe n'ihu na peeji a.
Maka ndị gị dị njikere ịmalite ịzụ ahịa, biko nyochaa ntuziaka ntinye aka 5 anyị n'okpuru. Nke a ga - enyere gị aka ịmalite ahia site na FCA ore taa.
Kwụpụ 1: Debanye maka Akaụntụ
Nke mbụ, ịkwesịrị ịga na weebụsaịtị nke onye ị họọrọ FCA na-ere ahịa. Na-esote, ị ga-ahụ peeji nke 'ịbanye' ma tinye adreesị email gị na paswọọdụ pụrụ iche iji banye maka akaụntụ ọhụrụ gị.
Tupu ịmalite ịga n'ihu, nkwekọrịta ị ga-ahọrọ iji gosipụta njirimara gị. Dị ka ọ bụla KYC (mara onye ahịa / onye ahịa gị) iwu - ndị na-ere iwu FCA chọrọ ka ha rịọ maka ozi gbasara gị. Nke a gụnyere ọnọdụ ego gị, akụkọ azụmaahịa gị / ihe ọmụma gị, ndidi gị nke ihe egwu yana n'ezie, njirimara gị.
Dị ka nke a, ị ga-enye otu akwụkwọ ikike ngafe gị ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala, yana akwụkwọ ikike maka ọrụ gị site na ọnwa atọ gara aga (iji gosipụta onye ị bụ). Ikwesiri itinye nọmba mkpuchi mba gị ma tinye ego gị na-enweta kwa ọnwa yana ntakịrị ihe gbasara onye ị bụ onye na-azụ ahịa.
Ozugbo njirimara gị ka akwadoro (na-abụkarị nzi) na onye na-ere ahịa ezitere gị ozi nkọwa gị, ị nwere ike ịlaghachi n'elu ikpo okwu ma tinye ego.
Zọ ịkwụ ụgwọ nwere ike ịgụnye:
Nyefe ikuku na mbufe
Debit / Kaadị akwụmụgwọ
E-obere akpa dị ka Skrill, PayPal na Neteller
Onye ọ bụla na-ere ahịa na ikpo okwu dị iche, yabụ ị ga-achọ ịlele nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị. Ọ dịkwa mma ịtụle mmetụta usoro ịkwụ ụgwọ gị ga-enwe n'oge ọ ga-ewe iji ruo akaụntụ ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, inyefe ego ụlọ akụ bụ otu n'ime ụzọ nkwụnye ego nwayọ nwayọ. Na-enyocha tebụl ego nke ụlọ ọrụ ọ bụla tupu ị tinye aka na akaụntụ.
Nzọụkwụ 4: Ịmalite ahia
A na-adụsi gị ọdụ ike ịmalite na akaụntụ ngosi, ebe nke a na-enyere gị aka inwe mmetụta dị mma nke ikpo okwu tupu ịmalite itinye ego gị.
Kama nke ahụ, a ga-enye gị 'ego akwụkwọ' iji zụọ ahịa na, n'ọnọdụ ahịa n'ezie. Ọbụna maka ndị ahịa nwere ahụmahụ, iji akụrụngwa akaụntụ ngosi bụ ụzọ dị mma iji nwalee atụmatụ dị iche iche. Maka newbies, nke a ga - enyere gị aka ijide mmegharị ọnụahịa yana ịme nyocha teknụzụ.
Kacha mma FCA Regulated Brokas nke 2021
Anyị ekpuchila usoro iji chọpụta, yana akụ iji zụọ ahịa - yabụ ka ọ dị ugbu a, ị ga-ebu ihe niile ị chọrọ ịma. Na usoro ịchọta ikpo okwu kachasị mma maka ebumnuche azụmaahịa gị - n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nhọpụta nke ndị na-ere ahịa aha anyị dị elu FCA.
1. eToro - Top gosiri Social Trading Platform
Nke a FCA ore bụ n'ezie a ahịa ndú mgbe ọ na-abịa na-elekọta mmadụ trading. Ikpo okwu na-enye ihe ruru 2,000 akụ sitere na ọtụtụ ahịa UK na mba ụwa. eToro bụ onye ama ama n'etiti ndị ahịa na-elekwasị anya na cryptocurrencies mana ọ na-enyekwa akụ dịka CFDs na Ebuka. Otu n'ime njirimara kachasị mma bụ 'ahịa azụmaahịa'. Nke a na-enye ndị na-etinye ego ohere i toomi onye ahịa nwere ahụmahụ site na ikpo okwu, ihe ọ bụla onye ahịa ahụ na-etinye na ya ga-apụtakwa na pọtụfoliyo gị.
Equities na ETFs na-abịa site na mgbasa ozi asọmpi na enweghị ọrụ. Abia na CFD na ahia ahia, otu a di. Ya mere, ị nwere ike ime atụmatụ ị họọrọ na-enweghị nsogbu site na ịkwụ ụgwọ ụgwọ. E nwere ugbu a ihe karịrị 16 cryptocurrencies na eToro nke enwere ike ree 24/7. Enwere iwepụ ego nke £ 5 iji tụlee, yana ego ntụgharị ego 0.5%.
ETF n'efu na ahia ahia
ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ dị oke elu
Ọ bụghị ọtụtụ ụzọ nyocha nyocha
2. Isi Obodo.com - Akwụ ụgwọ Commissiongwọ Ọrụ
Ọ bụrụ n’ịbụ onye mbido mgbe a bịara n’ahịa, Capital.com nwere ike ịbụ onye na-ere ahịa ị na-achọ. Nwere ike ịmalite site na obere £ 20 ma nwee ike ịzụ ahịa na obere osisi (chee obere na micro-ọpọlọpọ). Ihe ikpo okwu a anaghị ebubo ọrụ ọ bụla ma na-agbasa mgbasa ozi dị ala na CFDs.
Capital.com na-enye ohere inweta ahịa ahịa dị iche iche dịka LSE, NASDAQ, NYSE, TSE, na SSE. Onye na-ere ahia FCA a na-enye ego dị ka okpu ESMA ma nabata nnyefe ego ụlọ akụ, debit / kaadị akwụmụgwọ na e-wallets dị ka Skrill na PayPal. Ikpo okwu a nwekwara ngwa mmuta di ukwuu iji nyere gi aka izu ahia na uzo.
Nkwụnye ego pere mpe naanị £ 20
Tight na-agbasa na efu isslọrụ
Ọ dị mma maka ndị mbido
Deposit 250 min nkwụnye ego iji jiri nhọrọ nnyefe ego
Gaa Leta Capital.com Ugbu a
3. Trading 212 - Commisson Free Ebuka na ETFs
Ntọala na 2004, Trading 212 bụ onye FCA na-ere ahịa ọkachamara na Forex na CFDs. ETFs. na ebuka enwere ike ahia n'efu site na ikpo okwu a.
Ọ dị mfe ịmepe akaụntụ n'ịntanetị na Trading 212, na ikpo okwu mkpanaka dị mfe ịnyagharịa. E wezụga enweghị ngwaahịa na ọrụ ETFs - ndị ahịa ahapụla ịpụpụ, arụghị ọrụ na ego nkwụnye ego.
Asọmpi CFD ụgwọ
Enweghị nkwụnye ego ma ọ bụ ụgwọ ndọrọ ego
Nnukwu ụgwọ EUR / USD
Gị Trading 212 Ugbu a
4. IG - Imezu ngwa ngwa na igbasa agbasa
Onye na-ere ahia FCA a na-ebo ebubo ọrụ, mana, mgbe ị tụlere ogo ụlọ ahịa azụmaahịa - ị nwere ike ghara iche nke ukwuu. Broka a na-enye ihe karịrị puku iri, ahịa 17,000 CFD na ịnweta ọnụ ọgụgụ dị mma nke ahịa UK na mba ụwa. Ọrụ nke IG na-ebo ebubo siri ike na ahịa ị chọrọ ịzụ na. N'ụzọ na-akpali mmasị, onye na-ere ahịa a dịkwa na LSE ma na-enye azụmaahịa na-agbanwe agbanwe n'ọtụtụ ahịa.
IG na-enye nzọ ịkụ nzọ, nke dị mma iji zere isi obodo UK na-enweta ụtụ isi na uru. Na ore ahia ebubo a ewepụghị ọnụego nke £ 8 maka equities. Can nwere ike belata nke a ka ọ bụrụ £ 3 ma ọ bụrụ na itinye azụmahịa 3 ma ọ bụ karịa na ọnwa gara aga. Nkwụnye ego kacha nta na ikpo okwu a bụ £ 250, nke a ga-akwụ ụgwọ site na mbufe UK bank ma ọ bụ kaadị kredit / debit. Ga-enwetakwa ohere na akaụntụ nnabata na-akwụghị ụgwọ n’elu ịbanye.
10,000 mebere ngosi ego
Iwu nke ọtụtụ ahụ
Ngwaọrụ agụmakwụkwọ dị ukwuu
Nkwado ndị ahịa na-adịghị
5. Plus500 - Asọmpi Ego CFDs nke Ahịa
Ntọala na 2008, Plus500 anọwo gburugburu dị ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa ihe karịrị afọ iri. Ọ bụrụ n ’ị nwere mmasị na CFDs karịa Plus500 ga-abụ ezigbo nhọrọ maka gị.
Ọbụghị naanị na FCA nyere ikikere Plus500 - kamakwa CySEC, MAS, na ASIC. Ga - ahụ na ọ na - ejide ụlọ ọrụ na LSE. Site na onye na-ere ahia FCA a, ị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ puku akụnụba ego. Nwere ike ịzụ ahịa ihe ọ bụla site na ngwaahịa na indices na ebuka na cryptocurrencies.
Enweghị ụlọ ọrụ azụmahịa metụtara mgbe ị na-azụ ahịa site na onye na-azụ FCA a. Nkwụnye ego pere mpe iji bido bụ £ 100, nke a dị mma maka ndị na-ebu ụzọ. Mentzọ ịkwụ ụgwọ dị bụ nnyefe ụlọ akụ, kaadị akwụmụgwọ / debit, na PayPal. Plus500 na-enye leverage, agbanyeghị, njedebe metụtara dị ka iwu ESMA. Ekwentị mkpanaka nke ngwa ahia dị na ngwaọrụ gam akporo na iOS.
N'ime 2,000 CDF ngwaahịa maka ahia
Plus500 na-enye iwu ịkwụsị ụgwọ ọnwụ
Ihe karịrị ihe ngosi 100
Enweghị nkwado ekwentị
Onweghi ahia ahia
Enweghị akụkọ ego
Gaa na Plus500 Ugbu a
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye ọrụ ịzụ ahịa, yabụ ịmara onye ị ga-atụkwasị obi nwere ike bụrụ ihe nro. N'iburu nke a n'uche, ịhọrọ onye na-achịkwa FCA na-achịkwa agbanwe abụghị ihe ọ bụla. Ogo nke nchebe nke nyiwe ndị dị otú ahụ na-enye ndị ahịa nchekwa net megide omume ndị na-ere ahịa na-adịghị mma ma hụ na echedoro ego gị.
N'ihi ya, ị ga-enyocha ma ọ bụ kacha mma FCA achịkwa agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ n’ikpebie ịdebanye aha na onye na-ere ahịa na-edeghị na ibe a, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ ụlọ nke gị. Nke a kwesiri ịgụnye ego nke ikpo okwu, ọnụego ọrụ, mgbasa na nkwụnye ego / nkwụnye ego.
Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ iji azụmaahịa pere mpe na-azụ ahịa, ị na-ahọrọzi onye na-ere ahịa na ụgwọ dị elu agaghị aba gị uru maka ogologo oge. Ofkpụrụ ọzọ dị oke mma bụ iji ọtụtụ akaụntụ ngosi. Ha bara oke uru n'ezie ma a bịa n'itinye aka na ikpo okwu na n'ikpeazụ - n'ịmụta otu esi abụ ezigbo onye ahịa.
Enwere m ike itinye akaụntụ FCA na-ere ahịa m site na iji ego?
Onye ọ bụla FCA ore dị iche na nke a. Agbanyeghi na nyiwe ufodu na anabata nnabata, ndi ozo nwere ike were kaadi debit / kaadị ego, e-wallets ma obu cryptocurrencies. Na-elele onye na-ere ahịa na ajụjụ mgbe niile.
Achọrọ m ịnye onye na-azụ ahịa FCA NJ
Eeh. dị ka iwu mgbochi ịkwụ ego, onye ọ bụla na-ere FCA ga-emerịrị ihe KYC tụrụ anya ya. N'ihi ya, ha ga-amata ndị ahịa ọ bụla tupu ha edebanye aha ha.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na onye na - ere FCA m abanye na mmiri?
Ebe ọ bụ na FCA na-achịkwa onye na-ere ahịa gị, a na-echekwa gị site na iche iche ego nke na-eme ka ego gị dị iche na nke nke onye na-ere ahịa. Ndi FSCS kwesiri ka echekwa ego gi rue £ 85,000, mana jiri nke a n’aka onye ahia gi ka ijide n’aka.
Ego ole ka m nwere ike iji na FCA ore?
Ọ dabere na akụ ị chọrọ ịzụ ahịa. Enwere okpu na leverage nke ESMA nyere maka ndị nọ na UK na EU. Ihe atụ nke nke a bụ itinye ego mkpuchi cryptocurrency, nke etinyegoro na 1: 2
Kedu ihe bụ FCA ore?
FCA na-anọchi anya 'Financial Conduct Authority'. Tù a na-achịkwa iwu na-ahụ maka ịhazi na nyochaa ndị na-ere ahịa na UK iji hụ na ego zuru oke maka mmadụ niile.